မဟာပညာရှိ ဂျာရစ်(၂)- နိုင်ငံ့တာဝန် မကျေသေးတာ ယူ-၇၀ ယူ-၆၀ တွေလား? - News @ M-Media
မဟာပညာရှိ ဂျာရစ်(၂)- နိုင်ငံ့တာဝန် မကျေသေးတာ ယူ-၇၀ ယူ-၆၀ တွေလား?
in သရော်စာ — October 24, 2014
အောက်တိုဘာ ၂၄ ၊ ၂၀၁၄
* ဦးဂျာရစ်ရေ။ ။ မြန်မာယူ- ၁၉ ဘောလုံးအသင်းကတော့ မိုက်တယ်ဗျာ။ အာရှယူ- ၁၉မှာ ဆီမီးတက်ရုံတင်မကဘူး။ ၂၀၁၅ နယးဇီလန်မှာ ကျင်းပမယ့် ယူ- ၂၀ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲကို ပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အထိ နိုင်ငံ့ဂုဏ်သိက္ခာကို မြှင့်တင်လိုက်နိုင်ပြီ။ အရမ်းကျေနပ်တယ်ဗျာ။
ယူ- ၁၉ မြန်မာဘောလုံးအသင်းအတွက် ဂုဏ်ယူကျေနပ်စရာကောင်းတဲ့ အောင်မြင်မှုပါ။ နိုင်ငံ့ဂုဏ်၊ လူမျိုးဂုဏ်ကို မြှင့်တင်ပေးလိုက်တဲ့ (၁၉) နှစ်နဲ့ (၁၉) နှစ်အောက် လူငယ်လေးတွေကိုကြည့်ပြီး လူကြီးတွေ အတုယူလိုက်ကြပါလို့ ဦးဂျာရစ်ပြောပါရစေ။ ယူအေအီးလို ကိုယ့်ထက် နည်းပညာတွေရော၊ တစ်ဦးချင်းစွမ်းဆောင်ရည်ရော ကိုယ်ကာယချင်းမှာပါ အများကြီးသာတဲ့အသင်းကို မြန်မာအသင်း ဘာလို့နိုင်တာလဲ။ ဦးဂျာရစ် တွေးမိလိုက်တာက တစ်သင်းလုံး စည်းလုံးညီညတ်မှု ရှိတာရယ်၊ ရှေ့လယ် နောက် အားလုံး ကိုယ့်တာဝန် ကိုယ်ကျေတာရယ်၊ ရှေ့လယ် နောက် အားလုံး ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ်ကျေတာရယ်၊ အနိုင်ရလိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်ရယ်၊ ရလာတဲ့ အခွင့်အရေးကို လက်လွတ်မခံဘဲ ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် အသုံးချလိုက်နိုင်တာကြောင့် အခုလို အနိုင်ရပြီး နိုင်ငံ့ဂုဏ်သိက္ခာကို မြှင့်တင်လိုက်နိုင်တာပါပဲ။ လူငယ်တွေရဲ့ အဲဒီလုပ်ရပ်တွေကို အတုယူပြီး ဦးဂျာရစ်တို့နိုင်ငံအတွင်း မှီတင်းနေထိုင်ကြသမျှ တိုင်းရင်းသား အားလုံး ညီညွတ်ကြမယ်၊ ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ်ကျေကြမယ်၊ လိုချင်တဲ့ပန်းတိုင် ရောက်ကိုရောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ သံမဏိစိတ်ဓာတ်ရယ် ရလာတဲ့ အခွင့်အရေးကို လက်လွှတ်မခံဘဲ ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် အရယူနိုင်မယ်ဆိုရင် ဟိုးတစ်ချိန်က အာရှမှာ အထင်ကြီးခံခဲ့ရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ ပြန်လည် ၀င့်ထည်ပြီး နိုင်ငံ့ဂုဏ်၊ လူမျိုးဂုဏ် မြင့်မားလာပါလိမ့်မယ်။ ဦးဂျာရစ်တွေး မိတဲ့အတိုင်း ပြောလိုက်ပြီနော်။
* မြန်မာအသင်းရဲ့နည်းပြဖြစ်ရတာ ဂုဏ်ယူတယ်လို့ နည်းပြချုပ် ဂတ်ဖရိုင်းဒရစ် ကပြောတယ်။ မြန်မာအသင်းဟာ ကမ္ဘာ့ဖလား ယူ- ၂၀ ကို ထိုက်ထိုက်တန်တန် ခြေစစ်ပွဲအောင်မြငတာလို့ ကာတာနည်းပြကလည်း ပြောတယ်။ ယူ- ၁၉ တွေကတော့ နိုင်ငံ့အတွက် တာဝန်ကျေလှချည်ရဲ့။
ခင်ဗျားပြောပုံက ယူ- ၇၀ တွေ၊ ယူ- ၆၀ တွေက နိုင်ငံ့ဂုဏ်၊ နိုင်ငံ့တာဝန် မကျေတာကျနေတာပဲ။ အင်းနော်။
* သမ္မတကြီးက အငြိမ်းစားယူပြီးရင် ခြံစိုက်မယ်၊ စိန်တစ်လုံးသရက်က တွက်ခြေမကိုက်ဘူး၊ နဂါးမောက်သီးပဲ စိုက်မလိုလိုပြောဖူးတယ်။ အခုတော့လည်း နို့စားမွေးမြူရေးလုပ်မလိုလို အသံထွက်လာပါကလား။
သူက ပြည်သူတွေ နွားနို့သောက်ဖို့ ပြောဖူးတာဆိုတော့ နောက်ဆုံးကြားတဲ့အသင်းက ယုတ္တိဗေဒနဲ့ တွက်မယ်ဆို ဖြစ်နိုင်ခြေပိုများသပေါ့ကွယ်။ အဲ..နေပါဦး။ အငြိမ်းစားယူပြီး သူ့ဘာသာဘာလုပ်လုပ် မောင်ရင့်အရေးလား။ ကိုယ့်ဘာသာ လက်ရှိအလုပ်က ပင်စင်ယူပြီးရင် ဘာလုပ်မလဲပဲ စဉ်းစား။
* နိုင်ငံတော် အကြည်ညိုပျက်မှုနှင့် အစိုးရအပေါ် ဝေဖန်မှု ဘယ်လ်ုသုံးသပ်သလဲတဲ့။ အန်တီစုက မေးခွန်းထုတ်လိုက်ပြီ။ ဦးဂျာရစ်ရော ဘယ်လိုမြင်သလဲ။
ဦးဂျာရစ်အသက် (၅၀) ရှိပြီ။ တစ်သက်လုံးမြင်လာရတာကတော့ နိုင်ငံတော်= အစိုး၊ အစိုးရ= နိုင်ငံတော် ပါပဲကွယ်။ အဲဒီတော့ အစိုးရကို အကြည်ညိုပျက်အောင်ပြောဆို၊ ရေးသားဝေဖန်သမျှပြုခြင်းသည်ကား နိုင်ငံတော် အကြည်ညိုပျက်မှု မြောက်လေသတည်း။ မှတ်လော့။
* နိုင်ငံတော်အစိုးရက စာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲ လုပ်နေတယ်ဆို။ ဘာတွေများ ပြည်သူကို တင်ပြစရာရှိနေလို့ပါလ်ိမ့်။
ဟဲ့…အကောင်။ ပြည်သူကို တင်ပြစရာရှိလို့ မဟုတ်ဘူးဟဲ့။ တင်ပြမှာစိုးလို့…စိုးလို့။ ယူနတီအဖွဲ့ထောင်ထဲ (၇) နှစ်၊ Bi မွန်းတည့်နေအဖွဲ့က (၂) နှစ်တို့ (၃) နှစ်တို့ ခံကြ။ အဲဒီလိုကို စာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲ လုပ်နေတာ။